कस्तो बनेको छ एक सटमा चलचित्र जालो ? – समीक्षा | Hamro Patro
चलचित्र जालो समीक्षा
एक सटमा बनेको चलचित्र भनेर दर्शकमाझ चर्चामा रहेको चलाचित्र जालो यो हफ्ता प्रदर्शनमा आएको छ । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने प्रयासमा रहेको यो चलचित्रको आज हामि हाम्रो पात्रोको समीक्षामा के चलचित्र जालो एक सटमा खिचिएको भएर मात्र दर्शक हेर्न जाने कि यस चलचित्रको कथाबस्तु र प्रस्तुतिको कारणले गर्दा हल सम्म पुग्ने भन्ने कुराको जानकारी दिदैछौ आज चलचित्र जालोको समीक्षामा ।
भुपेन्द्र जबरा अर्थात निर शाह नेपालकै धनि उद्योगपति हुन् । उनको एउटा सानो सुखी परिवार छ ।एकदिन एउटा अनौठो फोन कल आएपछि उनको घर परिवारमा आएको समस्याको लहरहरुको जालोमा नै यो चलचित्रको कथा घुमेको छ । त्यो फोन कलहरु के कस्ता समस्याहरु लिएर आएका छन् ? निर शाहको जीवनमा कसले र किन समस्याहरु दिईरहेका छन् । यो सबै उत्तरहरु पाउनको लागि यँहाहरुले चलचित्र जालो हेर्नपर्ने हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : यसरी बन्यो एक सटमा चलचित्र जालो (हेर्नुहोस् भिडियो)
कथा, पटकथा संवाद
निर्देशक अराज केशबकै कथा र पटकथा रहेको यो चलचित्र पर्दामा चलुन्जेल दर्शकलार्इ बाधीराख्ने छ ।सर्वप्रथम त एक सटमा चलचित्र खिच्ने उनको परिकल्पना नै चलचित्रलार्इ इन्गेजिंग बनाउन पर्याप्त थियो । तर पनि एउटा मजबूत स्क्रिप्ट पक्कै पनि चलचित्रको लागि जरूरी थियो र स्क्रिप्टमा अराज केशबको प्रयास तारिफयोग्य छ । उनको पटकथा खासगरी अव्वल छ । चलचित्र सुरु भएको केहि बेरमा दर्शकहरु उनको लेखनको जालोमा पर्न सुरु हुन्छन् । दोस्रो हाफमा भने थुप्रै दर्शकहरुले चलचित्रमा लजिक खोज्न थाल्नेछन। त्यहाँ निर गएर अराजको पटकथा थोरै मात्रामा चुकेको देखिन्छ । के साच्चै प्रहरीको कडा निगरानी भएको घरको एउटा कुनामा अपराध भैरहेको कुरा प्रहरीको नजरमा पर्दैन ? अराजको अर्को कमजोरी भनेको मेनुका प्रधानको पात्रलार्इ समयमै स्थापित गराउन नसक्नु हो , जसले गर्दा कथा दोस्रो हाफ तिर पुगेपछि अनुमानित बन्न पुग्दछ । तर पटकथा यति छिट्टो सललल बगेको छ कि दर्शकहरुले चलचित्रमा धेरै लजिक खोज्ने समय नै पाउदैनन् । एक सटमा यो चलचित्र बन्नु पनि यो कुराको लागि फाइदा भएको हुनुपर्छ ।
चलचित्रका संवादहरुले भने खासै प्रभाव पार्दैनन् , अनुमान गर्न सकिन्छ धेरैजसो संवादहरु स्क्रिप्टमा लेखिएका भन्दा सीधै खिच्दा खेरि कलाकारहरुले परिमार्जित गरेका छन् । समग्रमा जालोको स्क्रिप्ट राम्रो छ , केहि कुराहरुमा लजिक नभेटिएपनि त्यसले खासै प्रभाव भने पार्दैन ।
नेपाली चलचित्र जगतमा जालो जस्तो एउटा चुनौतिपूर्ण चलचित्र बन्दा कलाकारको जिम्मा आफ्नो काधमा सम्हाल्न बरिष्ठ कलाकार निर शाह भन्दा अर्को नाम सायदै सुहाउथ्यो होला । निर शाहले आफ्नो कलाकारिताको अनुभव यो चलचित्रमा पस्केका छन्, उनि अव्वल छन् । मेनुका प्रधान जालोको पोस्टरमा एउटा चर्चित अनुहार हुन् , उनको पोस्टरको अभिव्यक्ति सबैले ख्याल गरेका हुन्छन , यस्तोमा चलचित्रमा निक्कै बेर उनको पात्रलार्इ महत्व नदिनु पक्कै पनि चलचित्रको सस्पेन्सको पक्षमा जादैन । उनको काम सदाझै अव्वल छ । बाकि सिनियर कलाकार लक्ष्मी गिरि देखि नवकलाकार निराजन प्रधान र मुना गौचन सबैको काम राम्रो छ । रेमन दास र प्रकास श्रेष्ठले पनि तारिफयोग्य काम गरेका छन् ।
छायांकार हरि घले लामाले जालोलार्इ सफल बनाउन एउटा मुख्य भूमिका खेलेका छन् । चलचित्रलार्इ एक सटमा खिच्दा सबैभन्दा चुनौतीको काम हरि घले लामाकै रहेको छ । यस्तोमा उनको कामलार्इ कमेन्ट गर्नु जायज हुदैन । तर घरको मूल ढोकामा खिचिएका दृश्यहरुले थोरै भएपनि दर्शकको ध्यान भड्काउदछ , त्यो लोकेसनलार्इ सक्दो कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुनेथ्यो । त्यसबाहेक सम्पादनमा प्रयोग भएका केहि इफेक्टहरु चित्त बुझ्दैनन् । चलचित्रको भियफएक्समा राम्रै नामहरु देखिएपनि काम भने त्यति सन्तोषजनक देखिदैनन् । संगीतमा “ बाउ बाजेको पालाको” बोलको एउटा गीत छ , गीतको जरुरत चलचित्रमा नदेखिएपनि उक्त गीतलाई एक सटमा हेर्दा बेग्लै आनन्द आउदछ । निर्माता मोहित मुनालको ब्याकग्राउण्ड स्कोर सन्तोषजनक छ ।
अराज केशबले आफ्नो दोस्रो चलचित्रमै एउटा ठुलो चुनौतिपूर्ण कार्य आट्नु उनको हिम्मतको उदाहरण हो । उनले यो चलचित्रलार्इ चनाखो भएर निक्कैनै सतर्कताका साथमा सफल बनाएका छन् । उनको फिल्म एक सटमा नभएको भएपनि एउटा राम्रै चलचित्र बन्ने पक्का थियो । चलचित्र एक सटमा खिचिनुले जालोमा सुनमा सुगन्ध भरेको छ । एक सटमा खिचिएको हुदा गल्ति गर्ने ठाउँहरु प्रसस्तै हुन सक्छन् , त्यहिभएर पनि जालोमा थुप्रै सानो सानो गल्तिहरु देखा पर्न सक्छन । तर समग्रमा अराज केशब आफ्नो प्रयासमा सफल भएको उदाहरणनै हो चलचित्र जालो । अराज,मोहित मुनाल र टिम बधाईका पात्र हुन् ।
जालो एउटा उतार चढावले भरिएको मनोरञ्नात्मक चलचित्र हो । दर्शकहरुले चलचित्र हेर्दा समय गुज्रिएको महसुस नै गर्दैनन् । एक सटमा खिचिएको हुदा पनि एक पटक सबै चलचित्र प्रेमीहरुले यो चलचित्र हेर्ने पर्ने हुन्छ ।
रेटिंग : ३.५/५ (सम्माननीय प्रयास, बाधीराख्ने प्रस्तुति)